भजनसंग्रह 132 ERV-NE - मन्दिर - Bible Gateway
भजनसंग्रह 131भजनसंग्रह 133
भजनसंग्रह 132 Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)
1 हे परमप्रभु! सम्झनु होस्, कसरी दाऊद पीडित भए।
2 दाऊदले परमप्रभुसँग एक प्रतिज्ञा गरेका थिए।
दाऊदले याकूबका सर्वशक्तिमान् परमप्रभुसँग शपथ लिएका थिए।
3 दाऊदले भने, “म आफ्नो घरभित्र जाने छैन,
म आफ्नो ओछ्यानमा ढल्कने छैन,
4 म सुत्ने छैन,
म आफ्नो आँखालाई विश्राम दिने छैन,
5 जबसम्म याकूबको सर्व-शक्तिमान् परमप्रभुको
घर बनाउन जमीन पाउँदिन, म ती कुराहरू गर्ने छैन!”
6 एफ्रातामा हामीले त्यसको विषयमा सुनेका थियौं।
हामीले किरियथ-योरीम भन्ने ठाउँमा करार पत्रको बाकस पायौ,
7 अब, पवित्र पालतर्फ जाऊँ,
त्यस पाऊदानलाई पूजौं जहाँ परमप्रभुले आफ्ना खुट्टाहरू राख्नुहुन्छ।
8 परमप्रभु, आफ्नो विश्राम गर्ने ठाउँबाट उठ्नुहोस्।
हे परमप्रभु! तपाईंको शक्तिशाली सन्दूकसित उठ्नु होस्।
9 हे परमप्रभु, तपाईंका पूजाहारीहरू धार्मिकताको पोशाकमा छन्,
तपाईंका भक्तजनहरू आनन्दित छन्।
10 तपाईंको आफ्ना असल दास दाऊदको निम्ति,
आफूले रोजेका राजालाई रद्द नगर्नुहोस्।
11 परमप्रभुले दाऊदप्रति एक प्रतिज्ञा गर्नु भएथ्यो।
परमप्रभुले दाऊदप्रति विश्वासी रहन्छु भनी प्रतिज्ञा गर्नु भएको थियो।
परमप्रभुले वचन दिनु भएको थियो कि,
दाऊद कै परिवारबाट राजाहरू आउने छन्।
12 परमप्रभुले भन्नुभयो, “दाऊद, यदि तिम्रा नानीहरूले मेरो करार,
र मैले सिकाएको नियमहरू पालन गरे भने,
तिम्रो परिवारबाट कोही एकजना सधैँ राजा हुनेछ।”
13 परमप्रभुले आफ्नो मन्दिरको लागि सियोन भन्ने ठाउँ रोज्नु भयो।
त्यही ठाउँमा नै उहाँले आफ्नो घर बनाउन चाहनु भयो।
14 परमप्रभुले भन्नुभयो, “यो सदा-सर्वदाको लागि मेरो ठाउँ हुनेछ।
यो ठाउँ मैले रोजें जहाँ म हुने छु।
15 म यस शहरलाई प्रशस्त खाद्य-प्रदार्थले पूर्ण रहोस् भनेर आशिष दिनेछु।
गरीब भन्दा गरीब मानिसले पनि खानलाई प्रशस्त पाउने छ।
16 म उनको पूजाहारीहरूलाई पनि उद्धारको वस्त्र पहिर्याउनेछु।
अनि मेरा भक्तजनहरू त्यहाँ अत्यन्त खुशी हुनेछन्।
17 म दाऊदको परिवारलाई बलियो पार्नेछु,
यस ठाउँमा मैले आफूले रोजेका राजाको निम्ति एक,
बत्तीको नियुक्त गरेको छु।
18 म दाऊदका शत्रुहरूलाई लाज र शर्ममा ढाकि दिनेछु
तर दाऊदको राज्यलाई उत्तरोत्तर बढाई दिनेछु।”